Ny fanokanan-tena misokatra sy marina
1.Ny orinasanay dia manamafy orina ny fananganana ny crédit sy ny fifehezan-tena, izay manaraka tsara ny lalàna amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa sy ny tombotsoany, manao am-pahavitrihana ny adidin'ny mpandraharaha, ary manambara am-pahombiazana ny fanoloran-tena amin'ny sehatry ny asa. kalitao ny entana sy ny serivisy ary manandanja ny fitondran-tena sy ny serivisy;
2.To hiantoka ny kalitaon'ny entan'ny orinasa, sy ny serivisy serivisy fanamafisana.
3.Hanapahanay mafy ny rafitra momba ny fampahafantarana sy ny tatitra isan-taona, ary hanatsarana ny fitantanana ny fisian'ny trosa.
4.Mandinika tsara ny fananganana ny kolontsain'ny tsy fivadihana mba hanamafisana ny fizaram-bahoaka sy fitarihana ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa.
Ny fametrahana rafitra fanamarinana ara-tsosialy sy tombana
1.Manamboatra ny fitsidihana fiverenan'ny mpanjifa, ny departemanta serivisy mpanjifa dia manao famerenana ny fitsidihan'ny mpanjifan'ny mpanjifa tsy tapaka, manangona ireo tsikera sy soso-kevitra ho an'ny mpanjifa, ary mametraka ireo rakitra fahafaham-po amin'ny mpanjifa. Raha hita ny olana, hamaha azy ireo amin'ny fotoana, ary manaova fanitsiana lehibe amin'ireo mpivarotra sy serivisy ilaina;
2.Ny manaiky ny fanaraha-maso ny fiarahamonina sy ny hevitry ny besinimaro, mihaino mavitrika ireo hevitra sy soso-kevitra avy amin'ny fiaraha-monina, ary manatanteraka mavitrika ny asa sosialy sy ny fanombanana.
Amboary ny rafitra sy ny kalitaon'ny traceability kalitao
1.Ny orinasanay dia mivarotra ny vokatra, MITADY ny varotra trano sy ny rindrambaiko fitantanana ny varotra mba hampivondronana ny fizarana, ny fizahana ny fanaraha-maso kalitao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fepetra mba hisorohana ny fiantraikany rehetra amin'ny kalitao hitranga;
2.Ny orinasa dia manana rafitra serivisy serivisy aorian'ny varotra, nametraka ny lamina ankapobeny amin'ny fikarakarana ireo olana momba ny kalitao, ary nametraka ny fomba fiasa momba ny fikarakarana voalohany ary avy eo dia mandray andraikitra. Jereo tsara fa ny departemanta rehetra ao amin'ny rafi-pitantanana kalitao dia tsy maintsy mametraka izany. fitantanana ny toe-javatra sy ny famakafakana olana amin'ny endrika voasoratra, ary zarao mazava tsara ny andraikitra hisorohana ny fiverenan'ny olana mitovy.
Mametraha rafitra fandraisana andraikitra momba ny asa
1.Ny orinasa iray dia mifehy mafy ny kalitaon'ny fizotran'ny fahazoana, ary mampita ny kalitaon'ny rafitra sy ny rafitra ara-tontolo iainana ao amin'ny orinasanay amin'ny mpamatsy, ary manondro ireo mpamatsy mpamatsy mendrika hifehezana ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny loharano.
2.Supplier mekanika fandraisana andraikitra, ny fametrahana mekanika famerenan'ny mpamatsy, fanaraha-maso ny orinasa, fanandramana entana, fitsapana ny vokatra handavana ireo fitaovana manta.
Amboary ny fandraisana andraikitra
1.Ny orinasa iray dia manondro ny rafitra fanaraha-maso manokana, ny departemanta tsirairay dia manangana ny rafitra fanaraha-maso ny tenany manokana, mitana ny fisafoana sy ny fanitsiana ny tenany amin'ny olana.
2. Ny ekipa mpivarotra dia hivondrona ary hihazona ireo sampana mifandraika amin'izany fa misy olana.